ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ် အာရှလေဆိပ်ကြီးများကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်း မီရန် ?? - Yangon Media Group
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ် အာရှလေဆိပ်ကြီးများကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်း မီရန် ??
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁ဝ
ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သစ်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့်ဝေး ကွာသည့်အတွက် သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်မှုရှိသည့်အပြင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုဖြေရှင်း ပေးနိုင်သည့် အာရှလေဆိပ်ကြီးများကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဆင့်အ တန်းမီရန်လိုအပ်ကြောင်း ပို့ဆောင် ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန့်စင် မောင်က နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ရက်က ပြောသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းတို့သည် ဟံသာဝတီအပြည်ပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တည်ဆောက် ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ရက်နံနက်အချိန်တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးဦးသန့်စင်မောင်က”ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်က ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့ကွာဝေးမှုရှိသည့်အတွက် ကား၊ ရထားချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်အထူးလိုအပ်မှုရှိ နေပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ယာဉ်ကြော ကျပ်တည်းမှုကိုပါဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီရန်လိုအပ်နေပါတယ်။ ဟံသာဝတီအ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်စီမံကိန်းအတွက် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန် ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေဆိပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တာဝန် ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပဲခူးမြို့အနီးရှိ ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းဟံသာဝတီအပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တည်ဆောက် ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ODA ချေးငွေရရှိရေးသည် အဓိကဖြစ် ပြီးလက်ရှိ ODA ချေးငွေရရှိရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဦးသန့်စင်မောင်က”ဟံသာဝတီလေဆိပ်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် Negotiation- Committee အနေဖြင့် တင်ဒါအောင် မြင်သူ JGC-Yongoa-CAI Consortium နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း frame work agreement လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ODA ချေးငွေရရှိ ရေးကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးစီးမှသာ ODA ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှု အ ခြေအနေတွေတိုးတက်ကောင်း မွန်လျက်ရှိပါတယ်”ဟုပြောသည်။ ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် (PPP)စနစ်ကိုအခြေခံသည့်စီမံကိန်းဖြစ် ပြီး ယင်းစီမံကိန်းပြီးစီးပါက ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကအချက်အချာကျသော အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းအဝင် အထွက် လုပ်သားများ တည်းခိုနိုင်ရေး မြဝတီကျောက်လုံးကြီး စခန်းကို အဆင့်မြှင့်နေ